Maka: ukuqondanisa | Martech Zone
Smarketing: Ukuqondanisa ama-B2B Wakho Namaqembu Wokumaketha
ULwesibili, April 6, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, i-2021 UStephanie Sperry
Ngolwazi nobuchwepheshe ezandleni zethu, uhambo lokuthenga lushintshe kakhulu. Abathengi manje benza ucwaningo lwabo kusenesikhathi ngaphambi kokuba bakhulume nommeleli wezentengiso, okusho ukuthi ukumaketha kudlala indima enkulu kunakuqala. Funda kabanzi ngokubaluleka "kokumaketha" ibhizinisi lakho nokuthi kungani kufanele uqondanise amaqembu akho okuthengisa nawokumaketha. Kuyini 'Ukumangaza'? ISmarketing ihlanganisa ukuthengisa kwakho kanye namaqembu wokumaketha. Igxila ekuqondaniseni imigomo nomsebenzi
Izici ze-Agency kanye nokuziphatha okufunwa ama-CMO
NgeSonto, ngoJuni 5, i-2016 Douglas Karr
Ukuba ne-ejensi kube nomvuzo futhi kuyinselele. Empandeni yakho konke esikufinyelela kumakhasimende ethu, sisakuthanda ukusiza ukuhambisa amakhasimende ngemodeli yokuvuthwa kokumaketha. Kusenza sikwazi ukusebenza ngazo zombili iziqalo namakhasimende ebhizinisi ngokufanayo, sikhulisa ngamasu amasu ukuqonda kwabo kanye nemali engenayo online. Engingazange ngikuqaphele ukuthi kungakanani ushintsho thina, njenge-ejensi, esizodinga ukukwenza ukuze sihlale phambili kwamajika futhi siqhubeke nokuncintisana
Izindlela ezi-5 Zokuqondanisa Ukuthengisa Nokumaketha ukuze Kukhushulwe Imali
NgoLwesithathu, July 22, 2015 NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2015 Douglas Karr
Ngaso sonke isikhathi lapho sithatha iklayenti, isinyathelo sokuqala esisithathayo ukuba yikhasimende. Ngeke sibize ngokushesha iqembu labo lokuthengisa. Sizobhalisela i-imeyili newsletter yabo (uma benayo), landa impahla, sihlele idemo, bese silinda iqembu lokuthengisa ukuthi lisithinte. Sizoxoxa ngaleli thuba kube sengathi besingahola, bese sizama ukwenza wonke umjikelezo wokuthengisa nabo. I-
Ukumaketha Kwenzelwe: Kungani Kufanele Uqondanise Ukuhlukaniswa Kwemikhiqizo Nokuqalisa Nokubika
NgoLwesine, Juni 19, 2014 IJaji uGraham
Ngemininingwane ephezulu yedatha eyenziwe kuziteshi eziningi zokumaketha, izinhlobo ziphonswa inselelo yokuhlela nokusebenza kwamafa wedatha afanele ukukhulisa ukusebenza kwesiteshi esiwela. Ukuqonda kangcono izithameli zakho ezihlosiwe, shayela ukuthengisa okuningi, futhi wehlise imfucuza yokumaketha, udinga ukuvumelanisa ukuhlukaniswa komkhiqizo wakho nokusebenza kwedijithali nokubika. Kufanele uqondanise ukuthi kungani bethenga nokuthi ngubani othengayo (isigaba sezethameli) kulokho (isipiliyoni) nokuthi kanjani (ukwenziwa kwedijithali) ukuze konke
Imininingwane Engaphezulu, Izinselelo Eziningi
NgoLwesine, Agasti 8, 2013 Douglas Karr
Idatha enkulu. Anginasiqiniseko ngani bantu kodwa iningi lamakhasimende ethu liminza kuwo. Ngenkathi izinqwaba zedatha ziqhubeka nokuqongelela, ngokujwayelekile sithola ukuthi iningi lamakhasimende ethu alisebenzisi amanye amasu wokukhangisa ayisisekelo adingekayo ukuthola, ukugcina nokwenza ngcono inani lamakhasimende. Akugcini lapho, balwela ukunqamuka okukhulu phakathi kwe-IT nokumaketha. Izolo nje, bekufanele ngikhulume nelinye leqembu le-IT lamakhasimende ethu ukuze